Ny safidy tsara indrindra amin'ireo tantara foronina miafina
Famerenana ny tantara miafina
The Alaska Sanders Affair nataon'i Joel Dicker
Kely sisa no afaka miroboka ao amin'ny Joel Dicker vaovao. Ary rehefa mitranga izany dia hijanona aho hanome fitantarana momba izay novakiako. Hatrany am-piandohana dia atolotra antsika ho tohiny ny The Alaska Sanders Affair. Saingy efa fantatsika ny fomba nandanian'i Dicker azy ireo namerina tantara vaovao…
Boky tsara indrindra 5 nataon'i Matilde Asensi
I Matilde Asensi no mpanoratra malaza indrindra any Espaina. Feo vaovao sy mahery toa an'i Dolores Redondo Manakaiky ity toerana hajain'ny mpanoratra Alicante ity izy ireo, saingy mbola lavitra ny lalana tokony halehany. Tao anatin'ny asany lava, ny varotra nataony ary ny isan'ny mpamaky azy ...
Ny lova navelan'i Maude Donegal. Ilay Zanaka Mbola velona: Tantara Mistery roa, nataon'i Joyce Carol Oates
Misy ny mpanoratra izay mihoatra ny karazana izay ilainy amin'ny tantara vaovao tsirairay. Izany no nitranga tamin'i Oates ary mitranga miaraka amin'ity andiana aingam-panahy manjombona ity saingy heverina fa fomba iray manontolo mankany amin'ny halehiben'ny fahafatesana, amin'ny fanandramana fifandraisana ara-panahy amin'ireo izay ...
The Sign of the Cross nataon'i Glenn Cooper
Efa hatry ny ela aho no nahita tantara momba ny stigmata kristiana izay manondro hatrany ny zava-mahagaga ho fahatsiarovana ireo izay nofidin'Andriamanitra. Noho izany dia mendrika ny manamarika ity tetika ity fa misy tranga vaovao momba ny fahamasinana namboarina, safidy ...
Boky tsara indrindra 3 nataon'i Julián Sánchez
Ny fahafantarana izay mitranga eo ambanin'ireo tapa-kazo amin'ny lalao baskety dia mitaky ny fifantohana sy ny fahaiza-manao ilaina mba hahitana izany tanana izay mamely ny sandrin'ny mpanohitra izany fa tsy ny baolina. Na izay mampiditra ny làlana mankany ambany amin'ny baolina izay manala ny ...
Ny boky 3 tsara indrindra amin'ny Agatha Christie
Misy saina manana tombontsoa afaka mametraka drafitra arivo sy iray miaraka amin'ny zava-miafina mifandraika amin'izany nefa tsy mikorontana na reraka. Tsy azo iadian-kevitra ny manondro azy Agatha Christie amin'ny maha-mpanjakavavin'ny karazana mpitsikilo, ilay nipoitra taty aoriana tamin'ny tantara momba ny heloka bevava, mampientam-po ary maro hafa. Izy irery, ary tsy misy fanampiana lehibe avy amin'ny rehetra ...
Ireo boky 3 tsara indrindra nataon'i Carlos Ruiz Zafón
Niverina tamin'ny taona 2020, nandao antsika ny iray amin'ireo mpanoratra lehibe indrindra amin'ny vatana sy endrika. Mpanoratra naharesy lahatra ny mpitsikera ary nahazo fankasitrahana malaza mitovy amin'izany nadika ho mpivarotra tsara indrindra ho an'ny tantarany rehetra. Angamba ilay mpanoratra espaniola be mpamaky indrindra taorian'i Cervantes, angamba nahazoana alalana avy amin'ny…
Boky 5 tsara indrindra amin'ny Javier Sierra
Miresaka momba ny Javier Sierra Midika izany fa miditra amin'ny tranga lafo indrindra vita any Espaina. Ity mpanoratra avy any Teruel ity dia lasa be mpividy indrindra amin'ny bokiny any Espaina sy eran'izao tontolo izao. ny bokin'ny Javier Sierra Izy ireo dia manolotra an'io volavolan-dalàna mahazatra amin'ny asa mistery lehibe io, miaraka amin'ny mahaliana ...
Tsy avy amin'i Ken Follett velively
Toa niverina i Ken Follett talohan'ny fikorontanana ara-tantara lehibe. Ary izany dia fiverenana miverina mametraka antsika eo amin'ny taona 90. Fotoana mety ho antsika izay efa eo amin'ny taona tsy mandinika. Ary izany no mahatonga antsika izay efa namaky ny Ken Follet taloha ...
Miss Merkel. Ny raharahan'ny chancelier misotro ronono
Tsy fantatrao mihitsy miaraka amin'ireo varavarana mihodina ireo ho an'ireo mandao ny politika mavitrika. Any Espana dia matetika no mitranga fa ny filoha teo aloha, ny minisitra teo aloha ary ny vondrona mpitondra fisotroan-dronono hafa dia manjaka amin'ny birao tsy ampoizina indrindra amin'ny orinasa lehibe. Saingy tena hafa mihitsy i Alemana. Ery …
pejy1 pejy2 ... pejy10 manaraka →
Lahatsoratra misimisy kokoa ...
Pejy manaraka "